တင်ဒါကြေငြာချက် - Sentry Box ဆောက်လုပ်ခြင်း - RayHaber
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စခန်းများခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ပွုပွငျလုပ်ငန်းခွင်စခန်းများကြားမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဆိုပါမြေပြိုမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Artova, Bekdig ရဲ့, Suluova, လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်း Turhal Yesilyurt ဘူတာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်က Wall မှအမျိုးအစား Panel ကို »
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5တူရကီအထွေထွေဒါရိုက်တာသမ္မတနိုင်ငံ။ ဝယ်ယူစီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက်
MALATYA 1 PCs ELAZIĞ2PCs TATVAN 1 PCs ဗန် 1 တစ်ဦးစုစုပေါင်း5PCs ကင်း 4734 အမှတ် 19 အပိုဒ်လေလံနေဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်၏ယောဘဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်တာဝန်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
KN: 2019 / 456335
က) အမည်: STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဝယ်ယူစီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက်
ခ) နေရပ်လိပ်စာ: Gazi ရပ်ကွက်အတွင်း Medeniyyet CAD ။ NO: 10 /244080 YEŞİLTEPE / YEŞİLYURT / MALATYA
ဂ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816
က) အမည်: ကင်း၏ MALATYA 12ELAZIĞ PCs PCs PCs ဗန် TATVAN 1 15စုစုပေါင်းအလုပ်မှာ Piece ပြန်တမ်း
5 ea ကွန်တိန်နာနှင့်ပစ္စည်းအပေါ် mounting
On-TATVAN-ဗန် Malatya-Elazığ: က c) / Place ကိုအပ်လုပ်ရမည်
ဃ) ကာလ / Delivery Date: 40 ပေးပို့တည်နေရာ (လေးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းမှ။
အဆိုပါ 10 ကာလ၌စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ. : အစဃ) အလုပျ
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 08.10.2019 - 09: 30
ခ) တင်ဒါကော်မရှင်အစည်းအဝေးများ၏အရပ်ဌာန (ကမ်းလှမ်းမှုကို၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်): TCDD5။ ဒေသန္တရရုံး meeting room
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကြိုတင်စောင့်တပ်ဖွဲ့အိမ်ယောဘကိုအောင်လိုက်တဲ့အခါ 27 / 07 / 2018 သံသယ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5များ၏စောင့်တပ်ဖွဲ့အိမ်စီးပွားရေး TC အထွေထွေဒါရိုက်တာအောင်အခါ။ REGION ယ်ယူခြင်းဦးစီးဌာန MALATYA 1 PCs ELAZIĞ2PCs TATVAN 1 PCs ဗန် 1 တစ်ဦးစုစုပေါင်း5PCs ကင်းအလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ပြန်တမ်း။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 376426 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) နေရပ်လိပ်စာ: Gazi ရပ်ကွက်အတွင်း Medeniyyet CAD ။ NO: 10 /244080 YEŞİLTEPE / YEŞİLYURT / MALATYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.t ဃ) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Başmakasအိမ်တွင်းအတူကွန်ကရစ်ဘူတာရုံအဆောက်အဦးတစ်ခုကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြုအဖြစ် path and Gelemen Walking Paths ပြုလုပ်ခြင်းတိမ်း Gelemen 27 / 05 / 2015 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ကွန်ကရစ် TC အထွေထွေဒါရိုက်တာအဖြစ်စီးပွားရေး Making ၏Başmakasအိမ်တွင်းနည်းလမ်းနဲ့ကွန်ကရစ်ဘူတာရုံအဆောက်အဦအဖြစ် path and Gelemen Walking Paths ပြုလုပ်ခြင်းတိမ်း Gelemen ။ စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်4အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 4734 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ပြုလုပ်ခြင်းကွန်ကရစ်ပြုလုပ်ခြင်းဖို့အတွက် walkway ထိုအခါကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်Başmakasလာပြီးအတူတူနေနေကြပါတယ်နှင့်အတူ Gelemen ဘူတာရုံအဆောက်အဦအဖြစ်တစ်ဝိုက်ပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး TCDD xnumxbölgညွှန်ကြားမှု Gelemen တော့ဘဲလမ်းများ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2015 59915-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Muhsin Yazicioglu ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အကြံအဖန်တွေချည်းအဆင့် Crossing စောင့်တပ်ဖွဲ့အိမ်ယောဘ၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 18 / 07 / 2018 အကြံအဖန်တွေချည်းအဆင့် Crossing စောင့်တပ်ဖွဲ့ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3များ၏အိမ်ဝယ်စီးပွားရေး TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ TCDD xnumxbölgညွှန်ကြားမှုMıntıkaအရေအတွက်များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး3အဆင့် Crossing စောင့်တပ်ဖွဲ့အိမ်ဝယ်စီးပွားရေးဧည့်ခံ 20 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 4734 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2018 328322-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 1 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 121-2324643131 - 4931 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: mxnumx @ outlook.co ဃ) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance ပြုပြင်ခြင်းဖမ်းဆီးရမိအိမ်တွင်းပွိုင့်၏ Diyarbakir ညွှန်ကြားမှုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဒေသဆိုင်ရာခေတ်မီစောင့်ရှောက် 16 / 05 / 2019 ကို Maintenance ပြုပြင်ခြင်းဖမ်းဆီးရမိအိမ်တွင်းပွိုင့်၏ Diyarbakir ညွှန်ကြားမှုဆောက်လုပ်ရေးနှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ၏ဒေသဆိုင်ရာခေတ်မီစောင့်ရှောက်လော့။ စီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက်ကို Maintenance purchasing ဆောက်လုပ်ရေး Diyarbakir ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိအမှတ်များဖမ်းဆီးရမိအိမ်တွင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ခေတ်မီပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 219084 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) နေရပ်လိပ်စာ: Gazi ရပ်ကွက်အတွင်း Medeniyyet CAD ။ NO: 10 /244080 YEŞİLTEPE / YEŞİLYURT / MALATYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.tr ​​...
Travian schema ဂိမ်းရထား Nation ပွင့်လင်း beta ကိုဗားရှင်းတူရကီနှင့်အတူရှိ၏ 17 / 09 / 2013 Travian အွန်လိုင်းဂိမ်း၏အသုံးပြုသူများသည်ရထား Nation ပွင့်လင်း beta ကိုဗားရှင်းအားဖြင့်ကစား 250 တထောင်၏ဂိမ်းများ, Türkçeleştirilerek, ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, ရုရှားနှင့်ဂိမ်းတောက်ပအနာဂတ်အပါအဝင် oluyor.almanya ကနေစကင်ဒီနေးနိုင်ငံများအဖြစ်တူရကီကစားသမား: Travian schema ဂိမ်းရထား Nation ပွင့်လင်း beta ကိုဗားရှင်းတူရကီနှင့်အတူရှိ၏ ရထားလမ်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဂိမ်းအသစ်ယခုအားလုံး Turkish အဘိဓါန်စကားပြောကစားသမားမှဖွင့်လှစ်သည်။ ပြီးသားထွက်ပေါက်ကနေဘူတာရုံမှ 13 တထောင်ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, ရုရှားနှင့်ယမ်အချို့ဆာဗာများကိုကျော်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူဂိမ်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကျော်ရထားလမ်းတစ်ပန်ကာကိုသင်ထားရန် Travian ဂိမ်းများနှင့်၎င်း၏ affiliates တောက်ပအနာဂတ်ရဲ့ (Miramagia, ဖီဖာ Manager ကို 250) ဂိမ်းရထားနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ် beta ကိုခရီးစဉ် ...
သံသယစောင့်တပ်ဖွဲ့အိမ်ယောဘကိုအောင်လိုက်တဲ့အခါ, TCDD ညွှန်ကြားမှုမှXnumx.bölg
TCDD Malatya5။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
Malatya, Malatya 44180 Türkiye + Google Maps ကို
တင်ဒါကြေငြာချက် - Irmak Zonguldak လိုင်းရှိကွန်ကရစ်တိုင်နံရံများနှင့်ရေနုတ်မြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း။
30: အောက်တိုဘာလ 10 30 @ - 11: 30
တင်ဒါအသိပေးချက် - Bandırmaဆိပ်ကမ်းရှိ Fender နှင့် Bollard ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
31: အောက်တိုဘာလ 14 00 @ - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Başmakasအိမ်တွင်းအတူကွန်ကရစ်ဘူတာရုံအဆောက်အဦးတစ်ခုကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြုအဖြစ် path and Gelemen Walking Paths ပြုလုပ်ခြင်းတိမ်း Gelemen
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အကြံအဖန်တွေချည်းအဆင့် Crossing စောင့်တပ်ဖွဲ့အိမ်ယောဘ၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance ပြုပြင်ခြင်းဖမ်းဆီးရမိအိမ်တွင်းပွိုင့်၏ Diyarbakir ညွှန်ကြားမှုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဒေသဆိုင်ရာခေတ်မီစောင့်ရှောက်
Travian schema ဂိမ်းရထား Nation ပွင့်လင်း beta ကိုဗားရှင်းတူရကီနှင့်အတူရှိ၏
beta ကို Tools များ
Else Otobüstenအရာအားလုံး "Beep" te ကနေတူရကီအတွက်ဆေးဆိုင်များမှတက်
BETA Tek တည်ဆောက်နေ Installer နှင့်ကုန်သွယ်ရေး INC
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (363) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)